Ungasusi iirekhodi ezivela kwindawo yolwazi yokuFikelela-Isikhokelo samanyathelo ngenyathelo
Ikhaya > iimveliso > DataNumen Access Repair > Ungasusi iirekhodi ezivela kwindawo yolwazi yokufikelela
Ungasusi iirekhodi ezivela kwindawo yolwazi yokufikelela
Xa ucima ezinye iirekhodi kwindawo yogcino lwakho lweMicrosoft Access (.mdb okanye .accdb iifayile) ngempazamo kwaye ufuna ukuzibuyisa, ungasebenzisa DataNumen Access Repair ukuskena .mdb okanye .accdb iifayile kunye nokufumana kwakhona iirekhodi ezisusiweyo kwiifayile kangangoko kunokwenzeka.
Cofa kwindawo ethi "Khetha", kwaye uqiniseke “Buyisa iingxelo ezicinyiweyo” inketho ihlolwe.
Ungafaka igama lefayile le-mdb okanye le-accdb ngqo okanye ucofe i
iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile.
iqhosha, kwaye DataNumen Access Repair Ndiza start ukuskena kunye nokufumana kwakhona iirekhodi ezisusiweyo kumthombo we-mdb okanye we-accdb. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba ezinye zeerekhodi kwindawo yedatha ye-mdb okanye ye-accdb zinokufunyanwa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yomyalezo enje:
Ngoku unokuvula i-mdb okanye i-accdb database ene-Microsoft Access okanye ezinye iinkqubo kwaye ujonge ukuba iirekhodi ezisusiweyo kwiitafile zakho zifunyenwe ngempumelelo.
apho ungacofa khona
iqhosha ukubona ingxelo eneenkcukacha zazo zonke iitafile, amasimi, iirekhodi, ubudlelwane kunye nezinye izinto ezifunyenwe, ngolu hlobo: